Ilay Firenena Feno Rehaka ao Pasifika Miaro ny Tanindrazany Amin’ny Hirampirenen’i Bikini · Global Voices teny Malagasy
Ilay Firenena Feno Rehaka ao Pasifika Miaro ny Tanindrazany Amin'ny Hirampirenen'i Bikini
Voadika ny 07 Mey 2017 10:08 GMT
Andianà mpifindramonina ao Marshall nihira ny hiran'ny Bikiniana tao Springdale, Arkansas. Sary: Daniel A. Gross
Ny 1 May 2017 no nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratr'i Daniel A. Gross ity. Navoaka etoana ho ampahany amin'ny fiarahan'ny PRI miasa amin'ny Global Voices.
Isantaona rehefa 1 May, misy firenena iray feno rehaka mankalaza ny fahaleovantenany ao Pasifika ao. Tamin'io andro io, ny taona 1979, nahazo ny fahaleovantenany ara-pitantanana tamin'i Etazonia ireo Nosy Marshall — firenena iray ela nisiana sy indraindray aza manelingelina ny fisiany ao amin'ireo nosy.
Nandritra ny ampahany be tamin'ny taonjato faha-20, ny mpanjanatany no nifehy ilay faritra, zara raha nisy fijerena ny filàna sy ny zon'ireo mponina tao Marshall. Nandritry ny Ady Lehibe Voalohany, nobodoin'i Japàna ireo nosy, natao ho toby famaharana ara-tafika tany ivelany. Azon'i Etazonia ny fifehezana azy nandritry ny Ady Lehibe Faharoa.
Tamin'ny 1946, niova ny zavatra rehetra, rehefa injay i Etazonia nisafidy ireo nosy Marshall ho toy ny toerana fanaovana fanandramana fitaovampiadiana nokleary. Tamin'izay taona izay, noteren'ireo manampahefana amerikana ny vahoaka tao Bikini Atoll hiala ny tranony sy hipetraka any amin'ireo nosy izay maro tamin'izy ireo no tsy mbola nahita maso azy ireny hatrizay niainany.
Nandritra izany fotoana izany, nifindra nankany Bikini Atoll ireo Amerikana manampahaizana, toerana izay nanaovan'izy ireo fanandramana baomba atomika ampolony nony farany. Tian'izy ireo ho fantatra mialoha izay ho fiantraikan'ny ady nokleary eo amin'ny fahasalamana ary ho fanatsaràna hatrany ny fitaovampiadiana amerikana, izay tsy ho ela dia hampiditra ny baomba hidrozena.
Indrisy, fa ireo bekotro maroholatry ny tafika Amerikana sy ny avy ao Marshall no nizaka ny vokany, ny sasany tamin'izy ireo izay nentina nankany amin'ireo nosy Marshall hamita ny ezaka fanadiovana. Samy mbola mitohy mizaka tahanà homamiadana avo dia avo ireo vondrona roa ireo, mbola tsy azo onenana i Bikini Atoll. Nandoa fanonerana i Etazonia ho ezaka fanaronana ireo fahavoazana.
Taorian'ny nanombohan'ireo andrana nokleary, nanao izay ho afany ireo tanosy manina te-hody, mba hitahirizana ny tantara sy ny fahatsiarovana an'i Atoll tanànan'izy ireo. Tamin'ny 1946, nanoratra tononkira iray momba ny tanindrazany ny lehilahy iray mponina tao Bikini, antsoina hoe Lore Kessibuki. Amin'ny fiteny ao Marshall, toy izao no fanombohany: “I jab ber emol, aet, I jab ber ainmon.” “Tsy afaka hijanona ela intsony aho — tena marina io. Tsy afaka hiaina ela intsony anaty fandriampahalemana sy fiadanana.” Farany, lasa hirampirenena ofisialy ho an'i Bikini Atoll ny hiran'i Kessibuki.
Na lavitra ireo Nosy Marshall aza, ankamamiana ilay hira, ho toy ny mariky ny fireneny. “Mihira azy izahay isaky ny misy fifamorian'ireo Bikiniana,” hoy i Faith Jibas, olona iray avy any Marshall, mpisolovava monina ao Springdale any Arkansas, fanjakana atsimon'i Etazonia. Mponina avy any Bikini Atoll no niavian'ireo ray aman-drenin'ny vadiny, ary ny reniny dia avy ao amin'ny nosy iray izay niharan'ny taratra nokleary.
“Miresaka momba ny alahelo lalina nateraky ny fandaozana ilay hira,” hoy i Jibas. Ananan'ireo namany sy ny fianakaviany ny sarin'ireo nosy Bikini, izay mampiseho torapasika fotsy mangatsakatsaka, faritra misy ranomasina manga mitoboka ary hazom-boanio. “Mampalahelo satria betsaka ireo olona tsy mbola nahita velively an'i Bikini,” hoy izy. “Paradisa tian'ny olona hisindàna fotsiny izao izy io. Ary tsy maintsy nisinda tao ny vahoakanay.”
Na ohatra aza ilay hira tsy milaza mivantana ny fitaovampiadiana nokleary, ny tonony dia mankalaza fahatsiarovana nosy iray izay fahiny dia toerana fonenan'ireo mpanjono sy tantsaha, ary lasa tany haolo ankehitriny:
Tsy afaka hijanona ela intsony aho — tena marina io.
Tsy afaka hiaina ela intsony anaty fandriampahalemana sy fiadanana
Tsy afaka intsony hitsotsotra maka aina eo ambonin'ny lafika sy ny ondako
noho ilay nosiko sy ny fiainako fantatro fahiny tao
Tena mitambesatra mafy ny eritreritra
Mahatonga tsy hanana hery sy ho anaty hadisoam-panantenana goavana
Miainga ny fanahiko, miriorio ary lasa manalavitra
Lasa any amin'ny toerana izay mahavoageja azy anaty korianam-kery goavana
Ary avy eo fotsiny aho vao mahita fitsaharana
Ambaran'i Jibas fa rehefa nihalehibe izy, tsy dia nahafantatra firy loatra momba ilay tantaran'ny nosin'ny razambeny. “Teraka sy lehibe teto Amerika aho, saingy tsy nianatra velively momba ny tantarako manokana tany anatin'ireny bokin-tantara ireny”, hoy izy. Nampirimina ho tsiambaratelo ny tantara sasany momba ireo andrana nokleary, amin'ny ampahany dia noho ny fifaninanana hazakazaka mamorona fitaovampiadiana teo amin'i Etazonia sy ny Firaisana Sovietika. “Ampahany iray goavana tamin'ny tantara ary nampirimina nandritry ny fotoana elabe io.”
Mbola mijanona miankina betsaka amin'i Etazonia ireo Nosy Marshall, amin'ny ampahany dia vokatr'ilay fifanarahana tamin'ny 1986 antsoina hoe Compact of Free Association. Nisy asa vitsivitsy azon'ireo Bikiniana natao, izay naverina napetraka tamin'ny faritra sasany tao amin'ilay nosy, hoy i Ajji Lewis, mponina iray hafa ao Arkansas izay teraka tany Bikini Atoll. “Izany no iray amin'ny antony mahabetsaka azy ireny aty Etazonia,” hoy izy nanazava tamin'ny alàlan'ny mpandikateny.
Ankehitriny, anjakazakan'ireo lova navelan'ireo andrana nokleary ilay firenena, ary tsy izay ihany fa ny fiakaran'ny ranomasina ihany koa izay nanimba ny voly sy nikaoka ny morontsiraka. Noho izay antony izay, tsy mitsahatra ny mitombo ireo vondrom-piarahamonin'ny olona avy any Marshall, toy ilay iray ao Springdale. Araka ny ataon'izy ireo, lasa manana dikany vaovao ny hiram-pirenen'i Bikini, sy ny fihetsehampony hody an-tanindrazana.
“Rehefa mandre olona mihira ilay hira aho, tsy tànako tsy hirotsaka ny ranomaso,” hoy i Lewis. “Mampitamberina fahatsiarovana marobe ilay izy.”
Ajji Lewis (ankavia) teraka tany Bikini Atoll. Adelbert Laukon, iray avy any Marshall koa ary mpifindramonina miaina ao Springdale, Arkansas, no manampy azy amin'ny fandikàna teny. Sary: Daniel A. Gross